VBA Microstation: Yenza imephu ebotshiweyo-iGeofumadas
I-VBA Microstation: Yenza imephu edibeneyo
NgoJulayi, 2010 cadastre, Microstation-Bentley
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlule ndibonise indlela yokuvelisa iindlela zokushicilela usebenzisa Microstation. Ngaphambi kokuba kubekho olu khetho lokusingathwa kwamashiti kunye neemodeli, kwakuyimfuneko ukuyenza ngendlela yakudala, ukuvelisa iibhloko (iiseli) kunye nokusika umxholo.
Buyela kumzuzu wam sabatha, umzekelo endikubonisayo ngeli xesha ngumsebenzi ophuhlisiwe Visual Basic Microstation, apho imephu ebotshelelwe yenziwa khona, okanye ezinye izatifikethi zecadastral ziyibiza njalo. Ilungele amasebe e-cadastre, ekufuneka avelise imephu ngokwesicelo, kwinqanaba, inkonzo abayibiza yona kodwa ethi, ukuba ayizenzekelayo, ithatha ixesha elide.
U-Ante wayenevidiyo endiyifumene okwesikhashana, kodwa ngeenjongo zemfundo apha ndishiya indlela yaphuhliswa ngayo kwaye yenziwe ngokwezifiso.
Ingqungquthela, edibeneyo kwinqanaba lefama
Isiseko sedatha sokufikelela, esasiqulathe indawo yekholamu, ipherimitha, kunye nolungelelwaniso lomqolo. Emva koko ukudibanisa kolunye ugcino olunamagama abahlawuli berhafu (abantu), ukusuka kwiqhosha le-cadastral.
Ifayile. Oku kufuneka kubekwe kwindawo apho amathala eencwadi abhalisiweyo agcinwa khona (indawo yokusebenza / ubumbeko / iseli)
Kwi-VBA ifom yokubanjwa yenziwa ngefomathi yemaski ngokwekhowudi yecadastral kamasipala eyayiza kuyisebenzisa. Inesithuba sokongeza ukuqaphela kunye nokukhetha ukufakwa njenge izichasiselo amagama abanikazi, izitshixo ze-cadastral okanye inombolo yepropati kuphela.
Indlela eyenziwa ngayo
Emva kokuba iimpawu zikhethiweyo, iqhosha "lokuvelisa isitifiketi" lixinyiwe kwaye inkqubo isebenza ngokuqhelekileyo imisebenzi eya kwenziwa ngesandla xa isicelo singatholakali.
Ekubeni iqhutywe kwifayile entsha (umsebenzi), inkqubo ilandelayo:
I-flame yokubhekisela imephu edibeneyo enequlo
Bala inani ukusuka kwiinqununu eziqulethe icebo, ukuseka isilinganisi esifanelekileyo
Emva koko yakha ucingo malunga nepropati, ngobukhulu obufana nezakhiwo ezithandathu, ukwenzela ukuba ungafanele usebenze nayo yonke imephu
Emva koko wenza Klipu equlethe kuphela iziqendu eziyimfuneko, imida yepropati, iinombolo zefama, imida ye-apula kunye namagama esitalato. Kule nkqubo, umzekelo ukusebenza ixesha elide kuba iinqobo topological hayi afaneleka kahle kwezi iimaphu, endaweni onxulumanisa centroid edityaniswe imida, kwanyanzeleka ukuba ukudluliselwa Ukudlala edge ukuya centroid kunye nento Ukulawula imephu enye kunokuba iifayile zeendawo okanye ii-quadrants zenza uhlalutyo lunzima.
Ngoko ibala isikali, ukwenza ubungakanani reference block (iseli) kwinqanaba 1: 100 ukubona ukuba zibe kube utyebile okanye ubhityile kwaye beka iseli.
Emva koko uvelise ucingo kwisakhelo sezinto eziqukethe imephu eboshiweyo, kwaye unqumle ukwedlula.
Apho kufuneka oku, isatifiketi cadastral, apho imodyuli data lifakwa njenge-arhente yokuphumeza le projekthi, i-logo kamasipala, ummandla abaliweyo, isikali, inombolo amagqabi kunye nenkcazo zibonisa.
Kwiphepha lesibini, yenza itafile yolungelelwaniso lwezitishi ezahlukeneyo, imigama kunye neebheringi eziveliswe kubhabho olusuka kocingo lwangaphakathi kwipropathi, ubeka inqaku kunye nenani le-vertex kwicala lewotshi kuleyo ifunyenweyo ngaphaya entshona. Ukuba kukho imfuneko, kuba i-polygon inee-vertices ezininzi, yenza amaphepha ayimfuneko
Kwiimeko ezigabadeleyo, iipasile eziphuma zisondele kakhulu, ezikufutshane nesitalato ebanzi kakhulu, emva koko ukhetho lwenziwa ukunyanzela isikali esilandelayo okanye ukuvelisa isikali 1: 125 apho inkqubo ibalwa khona. Ityala lomzekelo lifuna ukwenza oku, kuba bayabona ukuba abamelwane abakwelinye icala lesitrato abaphumi ngeloxesha.
Isicelo sisebenza kwiMicrostation Geographics V8, nangona ixesha liqhubeka kunye nezinye izinto eziliwaka zenkqubo leyo ngolunye usuku ndinethemba lokuyithetha.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Apho ukuthenga umshicileli womzalwana
Post Next Iintombi zokuqala zeoliOkulandelayo »
Iimpendulo kwi "VBA Microstation: Yenza imephu ebotshiweyo"
Ayikho ukuze ukhutshelwe. Kodwa ukuba unxibelelana nathi, sinokuyilungisa kwiimfuno zakho.
Ngaba unokundixelela apho ndingayithenga loo macro? kunye ne-cosnto yayo nceda? kukubonga ngokubonga
i-eulises cross uthi:
Ndicinga ukuba yayiyintloko yam endiyithandayo ukuba ndikwazi ukushiya imephu echanekileyo imephu yenkqubo efanelekileyo yenkqubo jajajjaja